ओमिक्रोनबारे थाहा पाउनु पर्ने पाँच कुरा :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
नेपालमा अहिलेसम्म ओमिक्रोन भेरियन्टका संक्रमित भेटिएका छैनन्। छिमेकी भारत र अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकामा भने गत साता केही संक्रमित भेटिएका छन्।
हामी चिन्तित हुनुपर्छ?
ओमिक्रोन पत्ता लागेपछि यसले संसारभरि तरंग ल्याएको छ। जापान, इजरायल, मोरोक्कोलगायत मुलुकले विदेशीलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका छन् भने अमेरिका, बेलायत र इयूका मुलुकहरूले दक्षिण अफ्रिका र आसपासका मुलुकबाट उडान बन्द गरेका छन्। नेपालले पनि हङकङसँगै दक्षिण अफ्रिकासहित आसपासका मुलुकबाट प्रवेश प्रतिबन्ध गरेको छ।
जनस्वास्थ्य अधिकारीहरूले भने अहिले नै ओमिक्रोन यसअघिको डेल्टा भेरियन्टभन्दा खतरनाक छ भन्ने प्रमाणित भइनसकेको बताएका छन्।
ओमिक्रोन कति संक्रामक छ र संक्रमण भएपछि यसले कति सिकिस्त पार्छ भन्ने पनि अहिले थाहा छैन। दक्षिण अफ्रिकाका वैज्ञानिकहरूले पछिल्लो समय ओमिक्रोनको संक्रमण धेरै फैलिएको र पहिला संक्रमित भइसकेकाहरूलाई फेरि यसको पनि संक्रमण देखिएको बताएका छन्।
बेटा र डेल्टा भेरियन्ट आउँदा यति धेरै संख्यामा पहिला संक्रमित भएकाहरूलाई फेरि संक्रमण नभएको उनीहरूको भनाइ छ। दक्षिण अफ्रिकाका वैज्ञानिकहरूका अनुसार डेल्टाभन्दा ओमिक्रोन दुई गुणा बढी संक्रामक हुन सक्ने देखिएको छ।
एउटा अध्ययनले ओमिक्रोनको संक्रमणले धेरै सिकिस्त नपार्ने देखाएको छ। त्यो अध्ययन दक्षिण अफ्रिकाका युवाहरूमा मात्र गरिएकाले वृद्धवृद्धालाई यसको असर कस्तो पर्छ भन्ने यकिन छैन।
दक्षिण अफ्रिकाको मेडिकल एसोसियसनकी अध्यक्ष डाक्टर एन्जेलिक कोइट्जीले अस्पतालहरू भरिभराउ नभएको र अस्पताल आउने धेरै जना खोप नलगाएकाहरू रहेको बताएकी छन्। आफूले भेटेका धेरै संक्रमितले स्वाद र गन्ध नगुमाएको र उनीहरूमा अलिअलि खोकीमात्रै रहेको उनको भनाइ छ।
ओमिक्रोनबारे वैज्ञानिकहरू किन चिन्तित छन्?
दक्षिण अफ्रिकाका वैज्ञानिकहरूले सुरूमा यो भेरियन्टको स्पाइक प्रोटिनमा ३० वटाभन्दा धेरै म्युटेसन देखिएको जानकारी दिएका थिए। पछि बोत्स्वानाले सार्वजनिक गरेको केही नमूनाहरूमा झन् यसअघि कहिले पनि नदेखिएका ५० विभिन्न म्युटेसन भेटिएका थिए।
कोरोनाभाइरस आफ्नो स्पाइक प्रोटिनको मद्दतले मानव शरिरको कोषिकाहरूमा छिर्छ। अहिलेका भ्याक्सिनले त्यही स्पाइक प्रोटिनलाई टार्गेट गरेका छन्।
स्पाइक प्रोटिन त्यति धेरै म्युटेसन हुँदा यसले भ्याक्सिन लगाएपछि शरिरमा बनेका एन्टिबडीलाई छल्ने हो कि भन्ने डर छ।
स्पाइक प्रोटिनमा भएका यी म्युटेसन रोग सर्नेमा पनि अझै धेरै मद्दत गर्छ कि अर्को डर पनि छ।
भ्याक्सिनले काम गर्छन्?
विज्ञहरूले अहिले उपलब्ध भ्याक्सिनहरूले नै ओमिक्रोन भेरियन्टविरूद्ध केही हदसम्म काम गर्ने अपेक्षा गरेका छन्। खोप लगाएको ६ महिनापछि एन्टिबडी कम हुँदै जाने कुरालाई ध्यानमा राखेर बुस्टर डोज लगाउनु पर्ने आवश्यकता उनीहरूले औंल्याएका छन्।
अमेरिकी सरकारका प्रमुख मेडिकल सल्लाहकार एन्थोनी फाउचीले मानिसहरूलाई बुस्टर डोज लगाउन र मास्क लगाउने, भीडमा नजानेजस्ता सुरक्षाका तरिका अपनाउन आग्रह गरेका छन्।
केही वैज्ञानिकहरूले भने बुस्टर डोज नलगाए पनि पहिला लगाएका भ्याक्सिनले बनाएका टी सेलले भने काम गरेर सिकिस्त बिरामी हुनबाट रोक्ने आशा व्यक्त गरेका छन्।
खोप निर्माता मोडेर्ना, फाइजर-बायोएनटेक, जोन्सन एन्ड जोन्सन र अष्ट्राजेनेकाले आफूहरूले ओमिक्रोनको अध्ययन गरेको र नयाँ भेरियन्टविरूद्ध आफूहरूले काम गर्न सक्ने आत्मविश्वास व्यक्त गरेका छन्। (न्युयोर्क टाइम्सका प्रकाशित सामग्रीमा आधारित)
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १९, २०७८, ०५:२४:००
कैलालीमा तीन दिनदेखि बेपत्ता भएका बालक मृत फेला
दुर्व्यवहार गरेको भन्दै रेस्लर जुरेलीले दिइन् युवा संघका केन्द्रीय सदस्यविरूद्ध प्रहरीमा जाहेरी